Nin degan Magaalada Muqdisho oo maanta la kulmay dhacdo naxdin leh | Dhacdo
Home Wararka Maanta Nin degan Magaalada Muqdisho oo maanta la kulmay dhacdo naxdin leh
Nin degan Magaalada Muqdisho oo maanta la kulmay dhacdo naxdin leh
Ninkan oo degan Degmada Dharkiinley ee Gobolka Banaadir ayaa ka sheekeeyay dhacdo naxdin leh, oo maanta uu ku arkay Magaalada Muqdisho, intii ay wadooyinka xirnaayeen.
Wadooyinka oo saakay la xiray ayaa dib loo furay gelinkii dambe ee maanta. Tallaabada wadooyinka lagu xiray waxaa lagu macneeyay, mid ay dowladda kaga hortageysay bannaanbaxyo maanta lagu waday in ay Caasimadda Muqdisho ka dhacaan.
Ninkan oo magaciisa u qariyay sababo amni ayaa marka hore ka hadlay sida uu u saameeyay xirnaanshaha wadooyinka, isagoona sheegay in saakay ay shaqooyinkoodii si caadi ah u taggi waayeen.
“Saamayn weyn bay nagu yeesheen dad iska masaakiina oo iska shaqeysta, oo suuqyada Magaalada Muqdisho iyo ganacsi gaar loo leeyahay ka shaqeeyaa u badnayn, haddee saakay nin walbana kii tagayna lug buu ku tagay isagoo rafaaday, waqtigana ka habsaamay, dibna waa u noqonayoo gurigiisuu ku noqday. Marka maanta wax dhaqdhaqaaq ah ma jirin.” Ayuu yiri ninkan oo la hadlay BBC.
Wadooyinka qaab noocee ah ayaa loo xiray oo la weydiiyay ayuu ku jawaabay “Walaale wax loo reebtay ma jiraan labada dhinacba, dhegxaan, birro iyo ciidamo welibana hubeysan oo shacabka xitaa ku celinaya qori caaradiisa.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in uu Isgoyska Banaadir ku arkay, iyadoo laga celinayo haweeney fool ahayd, oo loo waday Isbitaalka Digfeer ee Degmada Hodan.
“Waxaan la kulmay saakay markii aan lugeynayay islaan umul ahayd oo loo waday Isbitaalka Digfeer ayaa waxaa laga celiyay meesha la yiraahdo Banaadir (Isgoyska Banaadir). Askariga weliba wuxuu ku hadlayaa ereyo aan ku haboonayn dadka shacabka ah in loo adeegsado, oo wuxuu ku leeyahay iga noqo, dusha soo saarta ama soo xambaara qofka umusha ah miskiinka ahoo dumarka ah oo xaamilada umuleysa, oo laga yaabo inay jidka ku dhex geeriyooto ama ay carruurta ku dhimato.” Ayuu yiri ninkan oo ka sheekeynayay dhacdadaasi naxdinta leh.
Su’aal ahayd mala idin sheegay sababta wadooyinka loo xiray, haddii ciidamada aad la hadasheen ayaa ku jawaabay “Waddo waala xiri karaa si kastaba ama amni ama si kale haloo xira’e, waxaa la rabay shacabka masaakiinta ah ee saakay ku soo kacay wadooyinka xiran in la qanciyo oo lala hadlo, waxay u xirantahay laga qanciyo, yaadse hadal ka dhageysaneysaa ama aad la hadleysaa? Ciddii aad isku daydid inaad tallaabo u qaado qori caaradiis oo xabadi ay ka dhaceyso ayaa ka soo horeyso. Cid kuugu soo taageysa qori qaab aad kula hadasho ma jirto. Marka magaaladu waa magaalo noocaas ah walaal.”
Masuuliyiinta Dowladda Somaliya iyo Saraakiisha laamaha ammaanka ayaan weli ka hadlin ujeedadii ka dambeysay in la xiro wadooyinka, marka laga soo taggo wararka sheegaya in loo xiray, si looga hortaggo bannaanbaxyo ay maanta magaalada ku qaban lahaayen Golaha Midowga Musharaxiinta.
Shacabka Reer Muqdisho ayay maanta u ahayd mid ka mida maalmihii ugu adkaa, intii wadooyinka magaalada la xiraayay.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay hawlihii shaqo ee Safaaradda Somaliya ee Kenya
Next articleWasiirka Amniga oo digniin u jeediyay shacabka Muqdisho iyo ciidamada